शेयर बजारको पाँचौं ठूलो कम्पनी बन्दै ग्लोबल आईएमई बैंक, कति पाउला ओपन रेञ्ज ? निगरानी -
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक शेयर बजारको पाँचौं ठूलो कम्पनी बन्ने भएको छ । यसअघि उत्कृष्ठ १० भन्दा बाहिरै रहेको बैंक मर्जरपछि एकैपटक ५ औं नम्बरमा उक्लिने भएको हो । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको पुँजी र बजार तात्कालिन बजार पुँजीकरणको आधारमा यस्तो सम्भावना देखिएको हो ।
कसरी आउँदैछ ५ औं नम्बरमा ?
मर्जर सम्झौताअघि कारोबार रोक्का हुनुअघि तात्कालिन ग्लोबल आईएमई बैंकको बजार पुँजीकरण ३० अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैंया थियो । त्यस्तै, तात्कालिन जनता बैंकको पुँजीकरण १७ अर्ब १२ करोड १६ लाख रुपैंया थियो । दुईओटा कम्पनीको बजार पुँजीकरण जोड्दा करिब ४७ अर्ब ५३ करोड ७७ लाख रुपैंया हुन आउँछ । यो पुँजीकरणकै आधारमा ओपन रेञ्ज तय हुने र सो रेञ्जमा केही घटबढ भएर मात्रै शेयर कारोबार हुनसक्ने भएकोले सो कम्पनीको पुँजीकरण पनि सोही हाराहारीमा हुनेछ । यसो हुँदा पहिलो कारोबारका आधारमा ग्लोबल आईएमई बैंकको पुँजीकरण पौने ४६ अर्बदेखि साढे ४७ अर्बको बीचमा हुनसक्छ जुन अहिलेको पुँजीकरणका आधारमा पाँचौं स्थान हो । नेप्सेले बजार पुँजीकरणलाई आधार मानेर नयाँ कारोबार रेञ्ज दिने गर्छ । नेप्सेले ग्लोबल आईएमईको साधारण शेयरलाई २५२ रुपैंयाको हाराहारीमा कारोबार रेञ्ज दिने सम्भावना छ ।
नबिल र इन्भेष्टमेन्ट बैंक अझै अगाडि, कृषि विकास बैंक बाहिरिदै
सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्यौं भन्दै आएको यो बैंक बजार पुँजीकरणमा भने अझै तेस्रो स्थानमै रहनेछ । ६९ अर्ब रुपैंया पुँजीकरण भएको नबिल र करिब ५७ अर्ब पुँजीकरण भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई उछिन्न ग्लोबल आईएमई बैंकको सम्भावना तत्काल छैन । तर यो शेयरको कारोबारपछि कृषि विकास बैंकको भने वर्षौदेखिको विरासत गुम्ने निश्चितजस्तै छ । बैंकले उत्कृष्ठ १० कम्पनीको हैसियत गुमाउने निश्चितजस्तै देखिएको हो ।
बजारमा ३४ अर्ब ३० करोड रुपैंयाको पुँजीकरण भएको कृषि विकास बैंक अहिले १० औं नम्बरमा छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको कारोबारसँगै यो स्थान ११ औं नम्बरमा झर्छ । यदि त्यो स्थान जोगाइराख्ने हो भने अहिले ४० अर्ब भन्दा धेरै पुँजीकरण भएको एनआईशी एशियालाई यो बैंकले जित्नुपर्छ । तर यही अवस्थामा सजिलो देखिँदैन ।